Mid ka mid ah Beelaha ka soo jeeda Puntland oo qaadacay Shirka wadatashiga ee ka furmay Magaalada Gaalkacyo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 26 August 2015
Gaalkacyo (Mareeg)—Iyadoo Madaxweynaha Maamulka Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu ka daah furay Shir wadatashi oo looga hadlayay aayaha Dadka degga Degaanada uu ka arimiyo Maamulka Puntland ayaa waxaa Shirkaasi ka soo horjeestay qaar ka tirsan Waxgaradka ka soo jeeda Degaanada Puntland.
Cabdullahi Saciid Ismaaciil oo ka tirsan Waxgaradka ka soo jeeda Degaanada Puntland ayaa waxuu sheegay in mid ka mid ah Beelaha degga Degaanadaasi in ay qaadaceen hanaanka uu u socdo Shirkaasi.
Mr. Cabdullaahi ayaa tibaaxay in Beesha uu ka soo jeedo ay bayaan ka soo saareen Shirkaasi maadaama uu ku tilmaamay in Beeshiisu aanu fahamsaneyn ujeedka Shirkaasi waxa laga damacsan yahay sida uu hadalka u yiri.
Hadalka Waxgarad Cabdullaahi Saciid Ismaaciil ayaa waxa ka horimaanayaa Shir weyne ay ka soo qeyb galeem Wasiiro, Xildhibaano, Waxgarad iyo masuuliyiin kale duwan kaasi oo ujeedkiisu ahaa sida Madaxweynaha Puntland Cabduwali Gaas uu sheegay in lagu adkeenayo danaha iyo wada jirka Bulshada reer Puntland.
Madaxweyne Xasan Sheekh iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray Diinsoor